ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာ….
Posted by manawphyulay on May 18, 2012 in Photography | 11 comments
သိပ်မှန်တာပေါ့ ပြိုင်မယ့်ပြိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာပြိုင်အကောင်းဆုံးဘဲ ပြိုင်ဆိုင်မှုကတော့ သူများတိုးတက်တာကို ကြည့် ပီးအားကျနေရုံနဲ့ဘယ်ပီးမလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနေ့တနေ့အချိန်ကုန်တာနဲ့ အမျှဘာများတိုးတက်အောင်လေ့လာလည်းးသင်ယူလည်း ကျက်မှတ်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ သုံးသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်
ငါ့ကိုယ်ငါပြိုင်တာတောင် မနေ့ကငါဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ် မနက်ဖြန်ငါဒီထက်ပိုချမ်းသာအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင် မကောင်းဘူးထင်တယ်နော် ……… မနေ့ကငါ ဘယ်လိုစိတ်ထားမကောင်းခဲ့ တာသူများကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တာ ဒီနေ့တော့ အဲလိုစိတ်တွေ နောက်နေ့ထပ်မဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး ဒီနေ့ထက်ပိုတော်တဲ့ငါ မနက်ဖြန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမလားပဲနော် ……….
အစ်မ မနောရေ … ဒီနေ့ငါနဲ့ နောက်နေ့ငါကို ပြိုင်ခဲ့လို့လည်း … ပူလောင်ရပါတယ် … ။
တစ်ခုခု မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာလျှင် ပြင်းပြင်းပျပျခံစားရပြီး ဟက်ထိတတ်တယ် … ။ ဒီတော့ … အသက်ရှင်နေချိန်လေး …. လိုချင်လောဘ ၊ ရမ္မက်ဒေါသတွေ ၊ တွေဝေမောဟတွေ သိပ်မထားတော့ပဲ … နေပျော်သလိုလေးနေလိုက်တော့တယ် …. ။ ပြိုင်နေရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆိုတာတောင ်ရင်တွေ ကြပ်လွန်းလို့ ပါ …
ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ အပြေးပြိုင်သလိုယှဉ်ပြိုင်ရတာရှိသလို လက်ဝှေ့ထိုးသလိုယှဉ်ပြိုင်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ အနိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသင့်သလို ရှုံးလာရင်လည်း ဘာကြောင့်ရှုံးရသလဲဆိုတဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေ့လာသုံးသပ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ညံ့လို့ရှုံးတာကို နိုင်တဲ့သူအပေါ်အမုန်းမပွားသင့်ပါဘူး။ သဘောထားကြီးသင့်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဦးဦးနေးချားရေ… တစ်ခါတလေ မတိုးတက်တာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတလေ စိတ်ဓာတ်ကျသလို တစ်ခါတလေတော့လည်း နည်းနည်းပိုတိုးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်က စကားပြောလာပြီလေ..
ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာက တဒင်္ဂစိတ်ကလေးပါပဲ ..
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်ရင် ရည်မှန်းချက်လေးတစ်ခုထားကြည့်ပါ..
အဲဒီ့ရည်မှန်းချက်ကို အရောက်သွားဖို့က ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ မလိုပါဘူး…
ဇွဲရှိဖို့ပဲ လိုတာပါ ..
မမရေ …နဲနဲ ပွားသွားတယ်နော် …
မမ မနောဖြူလေးရေ. ကျနော် ခုမှစဉ်းစားတွေးမိပါတယ်။မနှစ်က ကျနော်နဲ ့ဒီနှစ် ကျနော် ယှဉ်ကြည့်တာ
ဒီနှစ် အရှုံးပါလားဗျာ။ကျနော် ဘယ်လို ပြင်ရပေါ့မလဲ။အသက်ကြီးလေ. ပိုပျက်စီးလေ ဖြစ်နေသလားလို ့။
ဒီဘက်ခေတ် မှာ မြင်နေရတာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေတော်တော်လွှဲမှားလာကြတယ်ဗျ
မိန်းကလေး တစ်ချို့ဆို ရင် ကျွန်တော့်ရှေ့တင်ပြောတာ ကြားလိုက်ရတယ်
ဘယ်နေ့က ဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုကြောပြီး ဘယ်ဝတ်စားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
အင်းတစ်ချို့တော့ ရှိပါတယ် ၊အနည်းနဲ့အများပေါ့၊ယောကျာ်းလေးတစ်ချို့လည်းဒီလိုပါပဲ
ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ငါတော့ ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီ၊ဘယ်ဆိုတာမျိုးကို ဂုဏ်ယူပြီး
ပြောနေကြတယ် ၊တစ်ချို့လည်း ကောင်းတာရှိသလို အမျိုးမျိုးပေါ့ ဗျာ။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့
အဲ စိတ်ဓာတ်ပျော့တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ သိပ်မကောင်းဘူး။တစ်ချို့ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်တာတောင်တွေ့ဘူးတယ်။မနောဖြူပြောသလို မိမိကိုယ်မိမိပြိုင်ဖို့ဆိုတာကို လူတွေက သိရက်နဲ့ မေ့မေ့နေတတ်တယ်။ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းတစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုပါပဲ၊ဒီpost လေးဖတ်မိတော့
သတိ ရ သွားလို့ ရေးလိုက်တာ ပါ ။ကျွန်တော့်အတွေးလေးတွေပါ
ကြာပန်းလေးတွေကို ဒီဇိုင်း လုပ်ထားတာပဲ..
အတော့်ကို အားပေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါလည်း အနီလာပေးဦးမလား မသိဘူး။